Wikileaks iyo fadeexada xoriyada reer galbeedka | Somaliska
Beryahaan waxaa laga yaabaa in aad maqasheen magaca Wikileaks, Waa website uu leeyahay nin australian ah oo lagu magacaabo Julian Assange. Wikileaks ayaa jahwareer ku riday wadamada reer galbeedka ka dib markii uu siidaayay kumanaan dukumintiyo sir ah, ayadoo hada ay wadama reer galbeedku ku doodayaan in la soo xiro ama la dilo ninka madaxa ka ah websitekaan. Balse arintaan ayaa ceeb wayn ku ah bulshada reer galbeedka iyo sheekashadoodii in ay xoriyada hadalka qiimeeyaan. Midaan ayay ahayd miday horey ugu doodayeen markii Muslimiintu ka xumaadeen ragii aflagaadeeyay nabiga ayagoo sheegay in ay ragaas leeyihiin xoriyada hadalka. Balse arinta cajiibka ah ayaa ah waa maxay sababta uusan Julian Assange u lahayn xoriyada hadalka ee ragaas ay lahaayeen? Wadamada sida fool xumada ah uga qayb qaadanaya borobogaandada lagu hayo Julian Assange ayaa waxaa ka mid ah Sweden ayadoo ay amreen in la soo xiro ayagoo ku eedeynaya in uu kufsaday 2 dumar ah. Balse dad badan oo qubaro ah ayaa sheegay in arintaan ay tahay been abuur uu ka dambeeyo maraykanka si ay sharafta uga dilana ninkaan oo ay wado kale oo ay ku soo xiraan ugu helaan maadaama aysan si toos ah u weerari karin. Dukumintiyadii ugu dambeeyay ee uu sii daayay Wikileaks ayaa ceeb ku riday maraykanka iyo wadamo badan oo kale oo ay ka mid tahay Sweden. Isbuucaan ayaa ugu dambeysay oo ay shirkadii uu Wikileaks websitekoodu ka diiwaan gashanaaa Amazon ay sheegtay in ay xiriirka u jartay taasoo macnaheedu yahay in Wikileaks ay ku qasbanyihiin in ay shirkad kale raadsadaan oo ay dokumintiyada ku gaydsadaan. Balse maanta ayaa sidoo kale shirkadii magaca wikileaks.org diiwaan galisay ay guud ahaanba magaca hawada ka saartay ayadoo la sheegay in arintaas uu ka dambeeyay Maraykanka. Hadaba waxaa soo baxay arintii waligeed ay Muslimiintu aaminsanaayeen ee ahayd in xoriyada hadalka ee ay reer galbeedku sheegaan ay kaliya shaqeyso markii Muslimiinta loo danleeyay oo aysan macno lahayn markii ay arintu ku soo laabado reer galbeedka laftooda.
Beryahaan waxaa laga yaabaa in aad maqasheen magaca Wikileaks, Waa website uu leeyahay nin australian ah oo lagu magacaabo Julian Assange. Wikileaks ayaa jahwareer ku riday wadamada reer galbeedka ka dib markii uu siidaayay kumanaan dukumintiyo sir ah, ayadoo hada ay wadama reer galbeedku ku doodayaan in la soo xiro ama la dilo ninka madaxa ka ah websitekaan.
Balse arintaan ayaa ceeb wayn ku ah bulshada reer galbeedka iyo sheekashadoodii in ay xoriyada hadalka qiimeeyaan. Midaan ayay ahayd miday horey ugu doodayeen markii Muslimiintu ka xumaadeen ragii aflagaadeeyay nabiga ayagoo sheegay in ay ragaas leeyihiin xoriyada hadalka. Balse arinta cajiibka ah ayaa ah waa maxay sababta uusan Julian Assange u lahayn xoriyada hadalka ee ragaas ay lahaayeen?
Wadamada sida fool xumada ah uga qayb qaadanaya borobogaandada lagu hayo Julian Assange ayaa waxaa ka mid ah Sweden ayadoo ay amreen in la soo xiro ayagoo ku eedeynaya in uu kufsaday 2 dumar ah. Balse dad badan oo qubaro ah ayaa sheegay in arintaan ay tahay been abuur uu ka dambeeyo maraykanka si ay sharafta uga dilana ninkaan oo ay wado kale oo ay ku soo xiraan ugu helaan maadaama aysan si toos ah u weerari karin.
Dukumintiyadii ugu dambeeyay ee uu sii daayay Wikileaks ayaa ceeb ku riday maraykanka iyo wadamo badan oo kale oo ay ka mid tahay Sweden.
Isbuucaan ayaa ugu dambeysay oo ay shirkadii uu Wikileaks websitekoodu ka diiwaan gashanaaa Amazon ay sheegtay in ay xiriirka u jartay taasoo macnaheedu yahay in Wikileaks ay ku qasbanyihiin in ay shirkad kale raadsadaan oo ay dokumintiyada ku gaydsadaan. Balse maanta ayaa sidoo kale shirkadii magaca wikileaks.org diiwaan galisay ay guud ahaanba magaca hawada ka saartay ayadoo la sheegay in arintaas uu ka dambeeyay Maraykanka.
Hadaba waxaa soo baxay arintii waligeed ay Muslimiintu aaminsanaayeen ee ahayd in xoriyada hadalka ee ay reer galbeedku sheegaan ay kaliya shaqeyso markii Muslimiinta loo danleeyay oo aysan macno lahayn markii ay arintu ku soo laabado reer galbeedka laftooda.